Dzimwe nyaya dzakazara, naDomingo Villar. Ongorora | Zvazvino Zvinyorwa
Dzimwe nyaya dzakazara, naDomingo Villar. Ongorora
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 16/10/2021 12:00 | Vanyori, Mabhuku, Nyaya
Dzimwe nyaya dzakazara ndiwo musoro webhuku idzva na Domingo Villar, iyo inoratidzwa ne linocuts yeshamwari yake Carlos Baonza. Iyo inongoburitswa mune yakashambidzika edition uye inogona kuverengerwa pakati-masikati, kana zvishoma. Iko kusangana kwe 10 nyaya kana nyaya pfupi uye ndaive nerombo rakanaka kuti munyori akazvitsaurira kwandiri pakupedzisira Madrid Book Fair. Izvi zvangu ongorora.
1 Iyo pfungwa
2 Kuseka, kufungidzira, mashiripiti, zvakavanzika
Muna Ndira 2020 ndakapinda a kusangana naDomingo akarongwa na Tsika Makuriro muMadrid uye moderated ne Rafael Caunedo. Isu taive vanhu vangangoita makumi maviri uye takave nenguva yakanaka tichikurukura naye nezve mabhuku ake ane nyeredzi muongorori kubva kuVigo Leo Caldas. Nhau nhatu, Meso emvura, Mhenderekedzo yegungwa y Ngarava yekupedzisira kuti, kunyangwe vaine nguva yakareba pakati pezvinyorwa zvavo, vamuunzira budiriro uye, pamusoro pezvose, mukurumbira uyo vamwe vazhinji vane mazita makumi maviri vangade.
Muchikamu chekupedzisira chemusangano weSvondo akatiudza nezvenyaya idzi uye akativerengera rimwe. Isu takafara uye takakurudzirwa zvakanyanya zvekuti iye akazviburitsa zvekuti kana iye angave aine zano rekuzviita, tinogona kugutsikana zvizere. Uye zvakare, inogona zvakare kuve nzira yeku "kubhadhara" isu pachedu kune iyo kushivirira nekuda kwekumirira kwenguva refu pakati pemanovel nemanovels ayo isu tajairira kune vaverengi vazhinji vari vake. Saka, yaive ropafadzo.
Zvino, mushure mekuverenga nyaya, ini ndinoona iyo nyaya: ndeye Don Andrés akanaka. Uye zvakandiita kunyemwerera zvakare. Zvakanaka, zvese chaizvo.
Nenzira ye Mashoko okutanga, munyori anotiudza zvishoma nezvekuti sei agara achinyora nyaya pasina chimwe chikumbiro kunze kwekugovana kana kuverengera mukati kuungana kwemhuri kana shamwari. Zvakare, kuti mamwe akange atoburitswa uye uye kuti pese pavaimukurudzira kuti avape chimiro chebhuku, ainyepedzera kunge aida kuvasiya kune iyo yepamoyo uye yepedyo nharaunda.
Panguva imwechete, uye yehukama hwake nemunyori Carlos Baonza, akatanga kuvaratidza pamufudzi achiverenga. Asi kunobva kwauya kukakavara senge kwechokwadi kweiyo Denda iyo inokiya nyika kumba. Uye iwe unofanirwa kuyedza kuitazve iyo yakanakisa nguva iyo iwe yausingakwanise kuve kana kuigovana. Saka yaive nguva yekuunza idzi nyaya kuchiedza.
Kuseka, kufungidzira, mashiripiti, zvakavanzika
Mazita acho ndeaya:
La Maruxaina naVa Guillet
Iye anoita zvemidzimu weO Grove
Iye Mutsvene weBella Union
Mabel uye vanotaura
Don Andrés Handsome
Makore gumi nemashanu aIsabel Daponte
Uye zvese, kusvika padanho rakakura kana diki, zvine zvinobata zve nostalgia, Dzokera ku akapfuura, ivo mashiripiti, Chakavanzika uye, hongu, ye kusetsa, asi nezve izvo zvakadaro zvenyika yeGaligia iyo Villar iri. Yakarebesa ndeyekupedzisira, pfupi nyaya kwete nyaya. Uye chii zvakare share ndiyo mimhanzi toni yechinyorwa chomunyori ichi, chinoyevedza sezvakanaka uye chinenge chine rwiyo.
Kune avo vedu vanoziva zvishoma nezve yakanyanya aseptic uye inoshanda chikamu cheiyo mutauro, kuwedzera kune iyo kungwara iyo inogona kutapurirana, kuverenga Domingo Villar iri mufaro miviri. Ose ari mumanoveli ake uye mune idzi nyaya, mune izvo zvimwe zvakatonyanya kumira pachena, kubata kwaanako kwake uye iye cadence and the ritmo rondedzero inodhinda zvemukati ndeyechipiri kune hapana. Uye izvo zvinokosheswa mune panorama yemabhuku ari nyore kana nyore kugaya.
Idzi ngano dzinoverengwa senge nziyo uye vanosiya maungira nekuteedzera, kwegungwa, kweredzi, kwengano nengano, kwezvishamiso kana zvipoko, zvehondo nerunyararo. Vanowana kunyemwerera kubva kune avo vakapfava uye ivo vanogara vachikurevera kune iyo yemashiripiti kumashure iyo inodzosera yakadaro imwe nyika.
Kugara nemumwe? Handina kukwanisa. Uye asi? Kuti vashoma uye vanokurumidza kupera. Ndiro dambudziko naDomingo Villar: hazvina basa kana achinyora 640-mapeji enhau kana chiuru-izwi nyaya. Izvo zvinogara zvinokusiya iwe uchida zvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Dzimwe nyaya dzakazara, naDomingo Villar. Ongorora